Warbixin: Mohamed Salah, Ivan Perisic Iyo Andrea Belotti Oo Hogaaminaya Shan Xiddig Oo Ka Xamaasha Italy Oo Dhawaan Lagu Arki Doono Premier League – Kooxda.com
Home 2017 June Ingiriiska, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino Warbixin: Mohamed Salah, Ivan Perisic Iyo Andrea Belotti Oo Hogaaminaya Shan Xiddig Oo Ka Xamaasha Italy Oo Dhawaan Lagu Arki Doono Premier League
Warbixin: Mohamed Salah, Ivan Perisic Iyo Andrea Belotti Oo Hogaaminaya Shan Xiddig Oo Ka Xamaasha Italy Oo Dhawaan Lagu Arki Doono Premier League
June 16, 2017 · by	Abdi Weli Aadan · 0
Kooxaha Premier league ayaa xagaa kasta si waalan suuqa u galiya lacago badan iyaga oo kula soo saxiixanaya xiddigo cusub oo ay kooxdooda ku xoojinayaan.
Premier league ayaa ilaa haatan ah horyaalka kaliya ee lacagaha ugu badan suuqa kaliyay iyaga oo dhamaantood xiddigo cusub kooxohooda ku soo daray marka laga reebo kooxaha chelsea iyo Liverpool oo aan wali wax xiddig cusub ah oo weyn la soo saxiixan.
Kooxaha horyaalka premier leageu ayaa maalintii lala xiriiriyaa ku dhowaad 100 ciyaartoy oo kala duwan kana ciyaara boosas kala duwan.
Hadaba waxa aanu warbixintan ku eegi doonaa 5 xiddig oo ka ciyaara horyaalka Italy oo laga yaabo in aad dhowaan ku aragto horyaalka Premier league.
Xiddigan reer Masar ayaa si aad ah ugu dhow in uu noqdo xiddig Liverpool ah iyada oo ay kaliya inaga xigto wakhti inta lagu dhawaaqayo heshiiskiisa maadama ay haatan labada kooxood ku dhowyihiin in ay ka heshiiyaan lacagaha lagu helayo.
Weeraryahanka reer colombia ayaa la sheegayaa in aanu ku faraxsanayn kooxda Ac Milan oo uu isku diyaarinayo in uu xagaagan isaga tagi doono xiddigan ayaa xiiso waali ah ka helaya kooxaha Everton,West Ham iyo Arsenal.
Weeraryahankan ayaan ahayn xiddig magac weyn ku leh yurub laakiin waa xiddig ku jira liiska suuqa kala iibsiga ee ay kooxda Everton doonayso xagaagan in ay ku badasho Romulo lukaku oo chelsea ku wajahan.
Xiddigan ayaa ah xiddigo yar oo xilli ciyaareedkii hore soo bandhigay qaab ciyaareed niyad jab leh waxana uu doonayaa in uu isaga caraabo kooxda Inter waxana lala xiriirinayaa kooxda Man United laakiin waxa ay ilaa haatan labada kooxood isku af garan laayihiin qiimaha lacagta lagu heli kara.
Belotti ayaa haatan ah weeraryahanka ugu fican ee suuqa yaala kana ciyaara horyaalka Italy waxana lala xiriirinayaa kooxaha chelsea iyo Man United laakiin Qiimaha xiddigan ayaa aad u sareeya iyada oo kooxda Torino dalbanayso qiimo aan macquul ahayn.